Nooca beta ee ugu dambeeyay ee macruufka 15 wuxuu si otomaatig ah uga saaraa ololka muraayadaha sawirrada | Wararka IPhone
Nooca beta ee ugu dambeeyay ee macruufka 15 wuxuu si otomaatig ah uga saaraa ololka muraayadaha sawirrada
Kariim Hmeidan | 04/08/2021 18:00 | La cusbooneysiiyay 05/08/2021 08:27 | macruufka 15
Taleefannada casriga ah ayaa nolosheenna beddelaya, mar horeba way is beddeleen ... Oo miyaynaan u adeegsanayn wax kasta oo maalin kasta ah: shaqada, isgaadhsiinta, maaweelada nafteena ... Iyo kamaradaha? Wali miyaad sidataa kaamiradaadii? Xitaa sawir qaadayaasha xirfadleyda ah ayaa qiraya in in ka badan hal mar ay isticmaaleen iPhone ... Sida iska cad ma ahan kamaradaha qumman, laakiin waxay qabtaan shaqadooda marka hal -abuurkeennu soo baxo. Mid ka mid ah dhibaatooyinka soo noqnoqda waa hillaaca iftiinka muraayadaha indhaha, wax wax u dhimi kara sawiradeena (ama maya). Hadda nooca beta ee ugu dambeeyay IOS 15 wuxuu u hagaajiyaa nalalkaas hab. Boodada ka dib waxaan ku siinaynaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan isbeddelkan.
Oo waxaad mooddaa in si otomaatig ah loo sameeyo. Lens flares, ama lens flare, ayaa ah kuwa caadiga ah muraayadaha casriga ah sifooyinkiisa awgeed. Iftiimin laga yaabo inuu na xiiseeyo mar uun, laakiin taas oo aan shaki ku jirin inay tahay waxyeello u geysan karta sawirkayaga. Hagaag, hadda dhowr isticmaale ayaa ku jira Reddit waxay soo warinaysaa in farsamaynta uu macruufka 15 ka sameeyo sawirka ay isku dayayso inay qariso nalalkaasiyo Mararka qaarkoodna wuu baabbi'iyaa, hadba ku tiirsanaanta tooshka. Oo waxay umuuqataa in astaantan cusub ee iOS 15 ay shaqeyso laga bilaabo iPhone XR. Sideed ku ogaatay inuu jiro holac iyo in macruufka 15 ka saaro? maxaa yeelay Sawirka Tooska ah ayaa jooga, laakiin aan ku jirin hawsha.
Horumar yar oo lagu sameeyo softiweer, runtiina waxay tahay in macruufka uu yahay mid ka mid ah nidaamyada ugu wanaagsan ee sawirrada sawirrada, waa inaad tijaabisaa aaladaha kale ee tartanka. JJ Abrams (Lost, Star Trek) oo aad u jecel ololka muraayadaha indhaha ayaa ka baxay gorgortanka dhammaan wax -soo -saarkeeda. Adigana, Maxaad u malaynaysaa ka shaqaynta sawirka iPhone?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » Nooca beta ee ugu dambeeyay ee macruufka 15 wuxuu si otomaatig ah uga saaraa ololka muraayadaha sawirrada
Cod -bixinta WhatsApp -ka ee wada sheekaysiga la kaydiyay waxay ahayd muuqaal cusub
Qaabka mugdiga ah ee Khariidadaha Google hadda waa rasmi